Tomb of the Mask bụ ụjọ na ngwa ngwa pixel art arcade nwere ezi omume ọma | Gam akporosis
Tomb nke nkpuchi na-eburu gị tupu labyrinth site na egwuregwu dị egwu
Obere na obere vidiyo egwuregwu na-eme ka aha ha buru ibu, kedu ka Yobot si agba ọsọ, ka anyị na-agagharị n'egwuregwu ha ma anyị chọpụta na pikselụ ndị ahụ dị mfe, nke dị mfe, ma dị nkenke, na nnukwu ahụ riri ahụ ọ na-akpata, bụ ihe anyị na-achọkarị na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ na ha na erere anyinya igwe tupu anyi abanye na ya. Enwere m ike ịdepụta ole na ole n'ime ndị malitere igwu egwu ma ka nkeji oge gafere ha emeela anyị obi ụtọ nke mere na ọkara ọkara gafere n'echefughị ​​na anyị na-anụ ụtọ ya. Anyị ga-achọ ka nke a mee anyị na ọtụtụ aha ndị gafere site na throughlọ Ahịa Play, mana ọ dịghị otú ahụ.
Tomb of the Mask bụ otu n'ime ha. Ihe nkiri vidio mbụ bipụtara na iOS oge ụfọdụ gara aga, ma emesịa ebugara ya na gam akporo. Akụkọ nke aha a na-enye anyị dị mfe, ebe ọ bụ na onye ọkpụkpọ ahụ weere ọrụ nke onye njem Indiana Jones nke na-ezo n'azụ ihe nkpuchi ọla edo nke na-eme ka ikike ịrịgo mgbidi. Site na ebe a, njem ahụ na-eduzi anyị site na usoro ili dị iche iche nke na-aghọ ezigbo ụlọ nyocha na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọkwa jupụtara na ọnyà na nsogbu. Egwuregwu egwu na-agba ọsọ na-echere gị site na egwuregwu nke ga-ejide gị.
1 Egwuregwu ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa mgbe ị na-eme ya
2 Dabere na ngwa ngwa swipes
Egwuregwu ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa mgbe ị na-eme ya
Ndị na-egwu egwu ga-amalite ọkwa ọ bụla na ebumnuche nke ịmecha ya. A na-anakọta mkpụrụ ego na njem niile na egwuregwu arụzi dị mfe, ebe ọ bụ na mmegharị dị mfe n'akụkụ otu akụkụ anọ nke anyị nwere ike ịkwaga, ga-akpọrọ anyị ruo mgbe anyị gafere n'ime mgbidi na-esote. Agaghị enwe etiti ma ọ bụ nkwụsị, ị ga-esoro ha gaa ka ị gafere mgbidi ndị ahụ iji chịkọta mkpụrụ ego niile, zere ọnyà ma rute na njedebe nke ọkwa ahụ.
Site na mkpụrụ ego ndị ahụ anakọtara, ị nwere ike rụọ ọrụ dị iche iche nkà, dị ka nke na-emepụta ego ndị ọzọ, ebe onye ọzọ nwere ike iwepu otu onye iro nke na-egbochi gị ịmalite egwuregwu ahụ. Ikike ndị ọzọ na-enye gị ohere ifrii ọnyà na ọtụtụ ndị ọzọ ndị na-echere gị site na egwuregwu vidio a a na-akpọ Tomb of the Mask.
Dabere na ngwa ngwa swipes
Oge ị ga - edowe aha a, ya bụ, ị na - emegharị ahụ ọfụma nke ọma, ị nwere ike ịga ọsọ ọsọ ọsọ site na mgbagwoju anya ulo mkporo. Nke a ga - enyere gị aka izere ọnyà ndị ahụ na - agbanyeghị na ọ bụ ezie na ha na - eme ngwa ngwa rụọ ọrụ, gị na mmegharị ahụ ga - adị ọsịsọ. Ọ bụ ebe a ka a na-enweta uto nke aha a, nke na-eduga na ụda dị mfe na mmetụ ahụ a nụchara anụcha nke pikselụ nke na-emetụta onye na-agụ ya nke ọma na njem a.
Egwuregwu ahụ ejiri njirimara na-enweghị njedebe, nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ nke ukwuu na dungeons ndị a na-emepụta aghara aghara na nke siri ike. Enwere ekele na ụzọ dị iche iche dị, ebe ọ bụ na ọnọdụ ahụ na-enweghị ngwụcha ndị mmepe ndị ọzọ ga-enwe ike bipụtara ya na Playlọ Ahịa Google Play, mana onye mmebe nke egwuregwu a arụ ọrụ ya site na imepụta ọkwa site n'aka ma ọ bụ aka.
Tomb of the Mask bụ amara vidiyo egwuregwu dị dị n'efu site na Playlọ Ahịa Google. O nwere micropayments maka mkpụrụ ego, yana kedu mmeputakwa vidiyo maka mgbasa ozi. A ukwuu tụrụ aro egwuregwu na ike ga-egwuri ebube nke ọma.
Ihe niile dị na egwuregwu vidio a dị ezigbo mma. Ọ bụrụ na o nwere igwe ọrụ magburu onwe ya iji kpoo anyị, nke ọma ọ bụ ọkwa dị mma ma ọ bụrụ na anyị ele ya anya site na echiche nke pixel art. N'ezie, atụla anya ụdị agba dị iche iche na ihuenyo ahụ, ebe ọ na-egwu bit na monochrome n'ọtụtụ oge iji gosi ọdịiche dị na mgbidi ụlọ mkpọrọ site na mkpụrụ ego na agwa ma ọ bụ ọnyà.
Tomb nke Mask
Ezigbo egwuregwu egwuregwu
Nice monochrome pixel art
O siri ike ịchọta ihe
Developer: Udiri Obi UAB
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Tomb nke nkpuchi na-eburu gị tupu labyrinth site na egwuregwu dị egwu
Google weputara Nixon Mission na Philips Hue Color A19 Starter Kit na ulo ahia ya
YouTube ga-ekwe ka ịhazi oge ọhụụ na oge azụ [APK]